Iklabishi ekhulayo | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Iklabishi ekhulayo
Incazelo yezinhlobonhlobo ezinhle zezinkanyezi ezihlala njalo
Asters - enye yezimbali ezidume kakhulu neziyaziwayo emibhedeni yemifula nemibhede yemifula. Uthando lwe-Astra lokuthi liqhakaza lonke ihlobo, lijabulela umbala kuze kube phakathi kwekwindla. Izinhlobo ze-alpine aster I-alpine aster iyisitshalo sokuqala esiqhakazelisayo esiqala ukuthokozisa iso ngokunyanyiswa kwemibala ngoMeyi. Izinhlobonhlobo ze-aster ziphansi, kufika ku-40 cm, iningi lifana ne-daisy.
Sikhula iklabishi ensimini yethu: imithetho yokutshala nokunakekelwa
Indlela yokutshala iklabishi esivandeni sasekhaya evulekile: ukupheka, ukutshala nokunakekela izitshalo Ikhekhejidi izitsha zihlobisa imikhiqizo eminingi kazwelonke. Isizathu salokhu kudumo sisezindaweni ezingavamile kakhulu zalesi sitshalo, kanye nezakhiwo ezizuzayo.
Konke ngokunakekelwa okufanele nokutshala i-broccoli
Iklabishi ye-Broccoli iye yaziwa isikhathi eside ngezindawo zayo zokudla. I-Broccoli inconywa kubantu abanesifo sikashukela nabantu abanezinkinga zenhliziyo, futhi inani elikhulu le-folic acid ne-fibre liyenza umkhiqizo obalulekile wabesifazane abakhulelwe. Indlela yokukhulisa izithombo zazo Ngaphambi kokutshala, into yokuqala udinga ukunquma ngokukhetha okuhlukahlukene, bese ulandela ukulungiselela imbewu ye-broccoli.
Yini ewusizo iklabishi yeSavoy
Abaningi abavakashi bethu abaye phesheya (eYurophu, eU.SA, eCanada) bayaqaphela ukuthi iklabishi ezindaweni zokudlela zendawo kanye nasezintabeni zokudlela (ngezitsha ezihlukahlukene, ama-saladi namaqebelengwane) alula, anomusa futhi aphezulu kunezethu. Iphuzu lapha aliyona ikhono labapheki, kodwa iqiniso lokuthi bakhetha iklabishi yeSavoy lapha. Ngeshwa, iklabishi ye-savoy ayithandwa kakhulu lapha, nakuba izinzuzo zayo zinkulu kangangokuthi kufaneleka isihloko esithi "indlovukazi yemifino".
Indlela yokutshala iklabishi ngaphambilini ensimini yakho yembewu
Iklabishi - isihluthulelo somzimba onempilo. Futhi namuhla uzofunda ukuthi ukhule kanjani iklabishi yama-curly yama-seed kusuka kumbewu, yikuphi ukunakekelwa kwemifino okudingekayo nokuthi ungayigcina kanjani ekhaya. Iyini iklabishi esidala futhi ukuthi iyasiza kanjani Iklabishi Kale - uhlobo lweklabishi, uhlobo lensimu, lunezakhiwo eziwusizo. Okuvame ukubizwa ngokuthi i-grunkol noma i-braunkol.
Indlela yokukhulisa iklabishi izithombo
Iklabishi elimhlophe iyisici esibalulekile sokudla okunempilo nokulinganisela komuntu ngamunye. Le mifino iye yaziwa ngokuyinhloko ngenxa yokuthi iqukethe izinto eziningi eziwusizo kanye namavithamini (A, B1, B2, C). Ngakho-ke, akumangazi ukuthi iklabishi iyisimenywa esihlala njalo emibhedeni yabahlali bethu behlobo.
Iklabishi yaseChina pak choi: amathiphu okutshala nokunakekelwa
Iklabishi ye-Chinese pak choi ingenye yezinhlobo zeklabishi ezithandwa kakhulu e-East Asia. Ngenxa yokuhluma kwayo okuhle, ukungathobeki emhlabathini kanye nezakhiwo eziphakeme zokudla okunomsoco, abalimi abaningi ezweni lakithi sebeqale ukulima okuningi kwalolu hlobo lweklabishi. Sizokhuluma ngezimfihlo zokutshala okufanele futhi sikhathalele i-pak choi kulesi sihloko.
Ukulima kwe-agrotechnical kweklabishi kale: ukuhlwanyela izithombo nokunakekelwa ensimini
Iklabishi ekhanda, iklabishi yama-kare, iklabishi yasendle, "iklabishi yaseRussia", isiJalimane, isiDashi, i-Brauncol (i-Bruncol noma i-Grünkol) - wonke lawa amagama ahlukile okufanayo okungajwayelekile, okungaziwa kakhulu, kodwa okuwusizo kakhulu, okunomsoco futhi okulula kakhulu weklabishi okuyinto engadingi ukunakekelwa okukhethekile, kalula ibekezelela amaqhwa futhi ingakhula ngisho nokuhlala isikhathi eside.
Indlela yokutshala i-broccoli ensimini
Ezingxenyeni zethu, i-broccoli yaqala ukutshala futhi idliwe kungekudala. Kodwa-ke, lo mifino uthola ngokushesha ukuthandwa, okuyinto ewusizo, ukunambitheka nokuqukethwe okuphansi kwekhalori. Ngezinzuzo zalo, ungakwazi ukwengeza ngisho nokulula ekunakekeleni. Ake sibone indlela yokutshala i-broccoli ensimini.
Kungenzeka yini ukwandisa iklabishi ngaphandle kokukhipha futhi kuyini?
Ezindaweni ezisenyakatho, ukuhlwanyela iklabishi ngokushesha emhlabathini ovulekile kuyingozi kakhulu, njengoba kungenzeka ukuthi isithwathwa sihlala. Ngenxa yalesi sizathu, iklabishi ikhule ngendlela yokutshala ehilela ukukhetha. Namuhla sizokuthola ukuthi singakhipha kanjani iklabishi ekhaya, ukuthi yini ezosinika futhi yiziphi izimo okukhethwa kukho akudingeki.
Ngidinga ukukhipha amaqabunga eklabishi?
Iklabishi iyimifino ethandwa yizo zonke izakhamuzi zasehlobo. Esihlokweni sethu sizocabangela enye yemibuzo ehlupha abalimi abaningi bemifino: kuyadingeka yini ukukhetha amaqabunga aphansi eklabishi? Abalimi abaqalayo Klabishi bathi - enye yezitshalo ezinzima ezikhulile engadini, ngoba ngokuvamile izithombo ziyafa emhlabathini ngenxa yokungabi khona kwamanzi kanye nezondlo.
Imithetho yokunisela iklabishi emhlabathini ovulekile
Cishe bonke abalimi bakhula iklabishi ensimini. Noma kunjalo, le mifino idinga ukunakekelwa okukhethekile, ikakhulu uma kuziwa ekutheni. Esihlokweni sethu sizochaza ukuthi singayinisela kanjani iklabishi ngemuva kokutshala emhlabathini ukuthola isivuno esicebile nesinambithekisayo. Izimo zokukhanda iklabishi Ukukhula iklabishi kuwumsebenzi onzima kakhulu.
Imithetho eyisisekelo nemigomo yokunisela iklabishi evulekile
Iklabishi ingenye yezitshalo ezinkulu zemifino. Kutshalwe cishe kuwo wonke amazwe omhlaba ngenhloso yokusetshenziswa, futhi futhi njengesitshalo somuthi nesimhlobiso. Ukuthi akukho nsimu yemifino ongakwenza ngaphandle kweklabishi ebonisa ukuthi ukuzinakekela akulona nzima kakhulu. Kodwa-ke, isivuno esikhulu singatholakala kuphela ngenhlangano yokunisela nokufaka umanyolo efanele.
Izinhlobo zeklabishi isipho: incazelo, isithombe, ukutshala, ukunakekelwa
Iklabishi ingenye yezitshalo ezithandwayo kakhulu. Izinhlobo eziningi zayo ziyaziwa, namuhla sizokhuluma nge-Podarok ehlukahlukene, esaziwa esifundeni sethu. Incazelo kanye nezici Isipho sinezinhlobo eziphakathi konyaka weklabishi omhlophe. Ngokokuqala ngqa lezi zinhlobonhlobo zachazwa ebhalweni ngo-1961, ezivunyelwe ukulima ukuhweba.
Indlela yokunakekela iklabishi ngemuva kokutshala emhlabathini ovulekile
Abalimi abaningi, abalimi balinakekela ngokukhethekile ukutshala imifino, kodwa abazi ukuthi kufanele banakekele kahle iklabishi evulekile. Kulesi sihloko sizoxoxa ngezisekelo zokunakekelwa kwemifino ewusizo, kanye nokunikeza umquba wokutshala umhlabathi wesitshalo. Sinikeza ukuchelela okulungile Iphuzu eliyinhloko ekunakekeleni imifino ukuphuza kwalo.
Iklabishi udumo: izici ezihlukahlukene, ukutshala nokunakekelwa
Namuhla, iklabishi ikhula cishe zonke izindlu zasehlobo zaseRussia. Lo mkhiqizo uyathandwa kunoma yiluphi uhlobo: oluhlaza, oluthosiwe, oluphethwe, oluvutshiwe, olufakwe emanzini anosawoti, emagqumeni kanye nemikhakha yemifino. Futhi ngesizathu esihle, ngoba le mifino inenani elikhulu lezakhi. Uhlobo oluvame kakhulu lweklabishi omhlophe lubizwa ngokuthi "Udumo", incazelo yokutshala nokunakekelwa ensimini evulekile esikunikeza kulo mhlathi.
Indlela yokukhetha izinhlobonhlobo ezinhle zeklabishi ye-pickling ne-pickling
I-Sauerkraut noma iklabishi enomuncu yiyona isidlo esilula esivele sikhona ekudleni kwethu. Ekuboneni kokuqala, kulula kakhulu ukuyilungisa, futhi lokhu kuyiqiniso, into eyinhloko ukwazi ezinye izimfihlo ezizokwenza le nandi ibe yiphuzo elihle futhi ewusizo. Enye yama-nuances wokupheka yizinhlobonhlobo ezikhethiwe ezikhethiwe zokulondoloza i-salting, futhi yiziphi izinhlobo ezifanelekile lokhu, sizobheka lesi sihloko.
Iklabishi "Dzhetodor": izici, ukulima agrotechnology
Kuzo zonke izitshalo ezikhona, imifino ibamba indawo esemqoka ekudleni komuntu. Zidliwa eziluhlaza, zenezelwe ekudleni okulungele, futhi ziyakhiwe zibe amasaladi. Imifino ihlukaniswe yi-tuber kanye nezimpande, amakhabe, okusanhlamvu, utamatisi. Amasiko amaKlabishi, ayengabomndeni wakuKlabishi, ahlukaniswe njengeqembu elihlukile.
Izimangaliso ezi-6 zomhlaba wezimbali: izitshalo abaningi abangakaze bazizwe ngazo
Ikhukhamba-lemon: exotic engadini
Ukulondolozela Izindlela Zengadi: Umbiko Wokuhlangenwe Nakho
Pear "Abbot Vettel": izici kanye izimfihlo zokulima ngokuphumelelayo
I-Smitianta - ubuhle obuqhaqhazelayo bezimbali
Ukulinywa kwezihlahla zeapula ze-Antonovka
Usawoti: izakhiwo eziwusizo kanye nokulimala okuzosetshenziswa emzimbeni womuntu
URosa William Morris - Izici Zamasiko